Shiinaha Cable Fosfaatikada Birta siligga ee warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha indhaha HAL ADUUN
Taxanaha Waxyaabaha Extrusion
Buuxinta Taxanaha Maaddada
Taxanaha Cajaladda Daaha
Taxanaha Cajaladda Semi-tabinta
Taxanaha Cajaladda Olol-celiska ah
Taxanaha Taabashada Birta
Copper Clad Aluminium-magnesium Daawaha Fiilo
Cajalad Mice ah oo Sindheetik ah oo Fibre labbo dhinac ah leh
Cajalad bireed Maar Mylar for Cable Shielding
Filimka Polyester / Cajaladda Polyester / Cajaladda Mylar
Silig galvanized silig for fiilooyinka
Cajaladda Nylon-Semi-tabinta ah
Cajalad dhar ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn
Fiilooyinka Fishatiga ah ee Fiilooyinka Fibre Fiilooyinka Fiilooyinka
Shuruudaha Bixinta T / T, L / C, D / P, iwm
Waqtiga dirida 20 maalmood
Dekedda Loading Shanghai, Shiinaha
Baakadaha Kartoon ama sanduuq alwaax ah, 50kg / baakad ama sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
Siligga fosfized ee siligga fiber optic-ka wuxuu ka samaysan yahay ulaha birta kaarboon tayo sare leh oo loo maro taxane ah geedi socodyo taxane ah sida sawir qallafsan, daaweynta kuleylka, pickling, dhaqida, fosfateynta, qallajinta, sawir qaadista, iyo qaadashada, iwm.
Siligga fosfoorayd ee birta ah waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee loo isticmaalo fiilooyinka indhaha. Waxay ka ilaalin kartaa fiber-ka indhaha foorarsiga, taageerida iyo xoojinta qalfoofka, kaasoo faa iido u leh soo saarista, kaydinta iyo daabulida fiilooyinka indhaha iyo dhigida khadadka fiilooyinka indhaha, wuxuuna leeyahay tayo fiilo xasilooni leh, wuxuu yareeyaa calaamadaha cilada iyo astaamaha kale.
Fiiladda birta ah ee loo adeegsado xudunta fiilada indhaha ayaa asal ahaan ku bedeshay siligga birta ah ee la soo dhoobay waagii hore siligga birta ee fosfaytiska ah, tayadiisu waxay si toos ah u saamaysaa nolosha xarigga indhaha. Isticmaalka siligga birta ah ee fosfaytiska ah kiimikaad ahaan kama jawaabi doono dufanka ku jira fiilada muraayadaha si loo dardar-geliyo hydrogen loona dhaliyo haydrojiin lumis, taas oo hubin karta xiriir heer sare ah oo isgaarsiineed.
Siligga fosfized ee siligga indhaha ee aan bixinno wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
1) Dusha sare waa mid hagaagsan oo nadiif ah, oo aan lahayn cilado sida dildilaaca, baararka, qodaxda, daxalka, foorarka iyo nabarrada, iwm;
2) Filimka fosfaytisku waa isku mid, si joogto ah, dhalaalaya oo aan u dhicin;
3) Muuqaalku waa wareegsan yahay xajmi deggan, xoog siligga oo sarreeya, modul laastik ah oo waaweyn, iyo dherer hoose.
Waxaa loo isticmaalaa sidii xoojinta birta dhexe ee fiilooyinka indhaha ee isgaarsiinta.
Dhexroor magaceed (mm)
Min. xoog siligga (N/ mm2)
Min. miisaanka filimka fosfateynta (g/ m2)
Qalabaynta Elastic (N / mm2)
Dheeraynta haraaga (%)
.91.90 × 105
Fiiro gaar ah: Marka lagu daro qeexitaannada jadwalka kore, waxaan sidoo kale bixin karnaa fiilooyin bir ah oo fosfaytis ah oo leh qeexitaanno kale iyo xoog isdabamarin kaladuwan sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
1) Waa in lagu keydiyaa bakhaar nadiif ah, hawo leh oo qalalan;
2) Lakabka hoose ee goobta keydinta badeecada waa in hoos loogu dhigaa alaabooyinka uumiga u diidaya si looga hortago daxalka;
3) Waa in laga ilaaliyaa cadaadiska culus, garaacista iyo waxyeelada kale ee farsamo inta lagu jiro keydinta iyo gaadiidka.
Hore: Silig galvanized silig for fiilooyinka
Xiga: Caaga Taabashada Caag Fiber
J: Waxaan sugeynaa imaatinkaaga waxaanan kugu hogaamineynaa inaad soo booqato warshadayada.
Q2: Sidee dhakhso ah ayaan ku heli karaa oraahda?
J: Badanaa waxaan ku soo qaadanaa 24 saacadood gudahood qalabka fiilooyinka caadiga ah ka dib markaan helno baaritaankaaga. Haddii aad aad ugu baahan tahay helitaanka qiimaha, fadlan na soo wac ama noogu sheeg emailkaaga si aan u tixgelinno mudnaanta baaritaankaaga.
Q3: Waa maxay shuruudahaaga xirxirida?
A: Durbaan alwaax ah, sariirtaada plywood, sanduuqa alwaax, kartoonka ayaa ikhtiyaar u ah, waxay kuxirantahay waxyaabo kala duwan ama shuruudaha macmiilka.
Q4: Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
J: T / T, L / C, D / P, iwm. Waxaan ku tusi doonaa sawirrada badeecadaha iyo xirmooyinka ka hor intaadan bixin dheelitirka.
Q5: Waa maxay shuruudahaaga gaarsiinta?
J: EXW, FOB, CFR, CIF. Waxaad dooran kartaa midka kuugu habboon ama kharashka kuugu habboon.
S6: Sidee ku saabsan waqtiga dhalmadaada?
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 7 illaa 15 maalmood kadib helitaanka lacagtaada hormariska ah. Waqtiga bixinta gaarka ah waxay kuxirantahay walxaha iyo tirada amarkaaga.
S7: Waa maxay siyaasadaada tusaalahaagu?
A: Muunad tijaabadaada ah ayaa la heli karaa, Fadlan la xiriir iibkeena si aad u dalbato muunadda bilaashka ah.
S8: Sideed uga dhigeysaa ganacsigeennu mid waara iyo xiriir wanaagsan?
J: 1. Waxaan haynaa tayo wanaagsan iyo qiimo tartan ah si aan u hubino in macaamiisheenu ka faa'iideystaan.
2. Waxaan u ixtiraameynaa macmiil walba sida saaxiibkeen oo waxaan si kal iyo laab ah ula ganacsanaa oo aan saaxiibo la samaynaa, meel kastoo ay ka yimaadaan.
S9: Ma waxaad siisaa dhammaan qalabka fiilooyinka sida ku xusan fiilooyinka aan soo saarno?
J: Haa, waan awoodnaa. Waxaan haynaa farsamo yaqaan ku takhasusay wax soo saarka kaas oo ku howlan falanqaynta qaabdhismeedka xarigga si loo taxo dhammaan qalabka aad u baahan tahay.
S10: Maxay yihiin mabaadi'daada ganacsi?
J: Isku-darka kheyraadka. Caawinta macaamiisha inay doortaan agabyada ugu BADAN, badbaadinta kharashka iyo hagaajinta tayada.
Faa'iido yar laakiin leexasho deg deg ah: Caawinta fiilooyinka macaamiisha si ay ugu tartamaan suuqa isla markaana ay si deg deg ah u horumariyaan.
Silig Foosto ah
Fiilooyinka Fishatiga ah ee Fiilooyinka Fiilooyinka
Fiilooyinka Fishatiga ah ee loogu talagalay Xoojinta Fiilooyinka Fudud
Waayir bir ah oo Fosfaatis ah
Hot silig galvanized galvanized for Wire Armoring
Yarn Aramid oo loogu talagalay siligga iyo fiilada, Xarkaha Xarkaha Fiber Optic
Ulaha lagu xoojiyay Caaga (FRP) Ulaha loogu talagalay Fiber Fibre Optical
Telefoonka gacanta: 0086-15162145573